Daryeelidda caafimaadka ee dalka Iswiidan | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Ku saabsan Iswiidhan / Daryeelidda caafimaadka ee dalka Iswiidan
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 25 11 2021
Daabac mawduuca oo dhan
Mawduucan wuxuu ku saabsanyahay in qofku daryeelo caafimaadkiisa gudaha Iswiidhan.
Waxaad ka fikiri doontaa waxa caafimaad yahay iyo waxa aad adigu keliga sameyn karto si aad u dareento wanaag oo u haysato caafimaad qab. Waxaad akhrin doontaa sida adigu aad isu daryeeli karto haddii aad jirato laakiin aanad u baahnayn inaad raadsato daryeel caafimaad.
Waxaad waxa dheeraad ah ka ogaan doontaa sida daryeelka bukaanka ee gudaha Iswiidhan u shaqeeyo, sida aad si sax ah u helayso daryeelka bukaanka iyo kuwa ka shaqeeya halkaas. Waxaad xitaa ka fikiri doontaa wixii ku saabsan xuquuqahaaga iyo waajibaadkaaga dhinaca daryeelka bukaanka.
Waxaa intaas dheer inaad ka fikiri doonto dhinaca arrimo ku saabsan jirkaaga iyo xaqa in qofku u taliyo jirkiisa.